ရသ – Mawlamyine Daily
https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/videos/294579951776788/ မျောလမွိုငျ၊ ၅ သွဂုတျ ၂၀၂၀ ကဗြာဆရာ ဝငျးမွငျ့ ၏ကဗြာအား ကဗြာဆရာ ဂိုးဂိုး(မောရမွိုငျ) မှရှတျဖတျသညျ။ #Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကဗျာ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment August 5, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၄ သြဂုတ် ၂၀၂၀ မင်ျဂလာပါ စာပခေဈြသူမိတျဆှမြေားခငျဗြာ ယခုအပတျစာခဈြသူမိတျဆှမြေားထံ မိတျဆကျပေးခငျြတဲ့စာအုပျမြားကတော့ မိုးမခစာပေ ဆိပျကမျးသာစာပေ နှငျ့အခွားစာပတေိုကျမြားမှ ဖွနျ့ခြီရောကျရှိလာသော စာရေးဆရာ ကဗြာဆရာမြားစှာရဲ့ ဗဟုသုတ ရသ စာပမြေားဖွဈပါသညျ။စာဖတျခွငျးဟာ အသိဥာဏျပှငျ့လငျးစသေလို မိမိအတှကျအကြိုးဖွဈထှနျးမညျ့စာပမြေားဖတျရှုလလေ့ာခွငျးဟာလညျး ဗဟုသုတမြားစှာရစရေုံမက ထိုးထှငျးကွံဆ အမှားမှနျဆငျခွငျနိုငျစှမျးကိုလညျးရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။ (၁) "အမိုးမရှိတဲ့ ကောငျးကငျ" ကဗြာဆရာ ကိုအငျးဝရဲ့ ကဗြာကောငျးမြားကိုဖတျရှုရမှာဖွဈပွီး ရောငျးစြေးမှာ ၂၀၀၀ ကပျြဖွဈပါသညျ။ (၂)"ရှငျပွီးသတေဲ့ နိငျငံတျော" ‌ဆရာ​​​​​​​ဇျောထှနျးဘာသာ​​​ပွနျ ထာွးးစာရေးသူ မငျးဆှနှေဈရေးသားထား​သော ကဗြာမြားအားဖတျရှုရမှာဖွဈပွီးရောငျးစြေးမှာ ၂၅၀၀ ကပျြဖွဈပါသညျ။ (၃)"အသုံးခရြှပေနျးခြီ" ဆရာ/ဆရာမမြားနှငျ့ကြောငျးသား​​​ကြောငျး​သူမြားအတှကျ​ဆောငျထားသငျ့​သောအ​ခွခေံပနျးခြီရေးနညျးစာအုပျဖွဈကာ ဆရာဦးမိုးကြျောသူ(လကျထောကျကထိက)ပနျးခြီအနုပညာမှစုစညျးပုံဖျောထားကာ ရောငျးစြေးမှာ ၂၀၀၀ ကပျြဖွဈပါသညျ။ အထကျပါရညျညှနျးထားသော စာအုပျကောငျးမြားအား မျောလမွိုငျမွို့တှငျ ကြျောကြျောစာပေ၊ … Continue reading Mawlamyine Daily စာအုပ်စင် →
Mawlamyine Daily	ဗဟုသုတ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment August 4, 2020 1 Minute
ကိုယ့်အထ္ထုပ္ပတ္တိ ကိုယ်တိုင်ရေး (ကဗျာ)
မော်လမြိုင်၊ ၁ သြဂုတ် ၂၀၂၀ ကံတရားနဲ့ စီစဉ်ထားတဲ့ အမှန်တရားအတိုင်း ဆိုရင် လူဟာ နေ့မြင် ညပျောက် ဟုတ်ပေမဲ့ မမြဲတာကတော့ သေချာတယ် ။ ဒီလိုဆိုရင် မမြဲတဲ့ လူဟာ မြဲအောင် ဘာလုပ်မလဲ . . ? သမိုင်းဝင် ကမ္ဘာတည်ဖို့ နာမည်ကျန်အောင် လုပ်ရမယ် ။ ရိုးသားစွာ ကြိုးစားရင်း အမှားမကိုးတဲ့ အများအကျိုးကို လုပ်ရမယ် ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်လို့ အသံကောင်း မထွက်စေပဲ စေတနာထားရမယ် ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ဘ၀ရဲ့ သဘောကို လက်ခံ အမှား အမှန်ကို သုံးသပ် ချစ်တတ်အောင်နေထိုင် နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် မမှန်းနဲ့ ငရဲနဲ့ လွတ်ကင်းအောင်လုပ် … Continue reading ကိုယ့်အထ္ထုပ္ပတ္တိ ကိုယ်တိုင်ရေး (ကဗျာ) →
Mawlamyine Daily	ကဗျာ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment August 1, 2020 1 Minute
https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/videos/750399592436814/ မျောလမွိုငျ၊ ၃ ဇူလိုငျ ၂၀၂၀ ဆရာမ ပန်ဒိုရာ၏ ကဗြာကို ကဗြာဆရာ ဂိုးဂိုး(မောရမွိုငျ)မှ ရှတျဖတျသညျ။ Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကဗျာ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment July 3, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ မင်ျဂလာပါ စာပခေဈြသူမိတျဆှမြေားခငျဗြာ ယခုအပတျစာခဈြသူမိတျဆှမြေားထံ မိတျဆကျပေးခငျြတဲ့စာအုပျမြားကတော့ မိုးမခစာပေ ဆိပျကမျးသာစာပေ နှငျ့အခွားစာပတေိုကျမြားမှ ဖွနျ့ခြီရောကျရှိလာသော စာရေးဆရာ ကဗြာဆရာမြားစှာရဲ့ ဗဟုသုတ ရသ စာပမြေားဖွဈပါသညျ။စာဖတျခွငျးဟာ အသိဥာဏျပှငျ့လငျးစသေလို မိမိအတှကျအကြိုးဖွဈထှနျးမညျ့စာပမြေားဖတျရှုလလေ့ာခွငျးဟာလညျး ဗဟုသုတမြားစှာရစရေုံမက ထိုးထှငျးကွံဆ အမှားမှနျဆငျခွငျနိုငျစှမျးကိုလညျးရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။ (၁) "အလှမျးတဈရာ" ဆိပျကမျးသာစာပမှေဖွနျ့ခြီထားပွီး ကဗြာဆရာ တောငျတှငျးအောငျသကျဦးရဲ့ အခဈြကဗြာနုနုလေးမြား အပုဒျတဈရာအား ကွညျနူးခမျြးမွရေ့ငျခုနျဖှယျဖတျရှုရမှာဖွဈပွီး ရောငျးစြေးမှာ ၂၀၀၀ ကပျြဖွဈပါသညျ။ (၂)"စံသာဖွူ အောငျလှဇံ (မွောကျဦးဗဒေ ရသစာတမျးမြား) စာရေးသူ မောငျခိုငျအောငျ၏ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျဦးနှငျ့ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားဖှယျ ဗဟုသုတရဖှယျ စကားပွအေကွာငျးအရာမြားအားဖတျရှုရမှာဖွဈပွီးရောငျးစြေးမှာ ၃၀၀၀ ကပျြဖွဈပါသညျ။ (၃) "ဗုဒနညျးကြ ခေါငျးဆောငျမှုပညာနှငျ့ ဘဝအောငျမွငျရေး" ဆိပျကမျးသာစာပမှေဖွနျ့ခြီထားပွီး စာရေးသူ … Continue reading Mawlamyine Daily စာအုပ်စင် →
Mawlamyine Daily	ဗဟုသုတ, ရသ, Lifestyle, Uncategorized	Leaveacomment July 2, 2020 1 Minute
Covid -19 သင်ခန်းစာ (ဆောင်းပါး)
မော်လမြိုင်၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၀ လူသားတွေဟာ ကိစ္စကြီးငယ်တစ်ခု၊ ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတိုင်း အဆိုးမြင်ဝါဒဘက်ကနေ တွေးတောပြီး စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်မချမ်းသာမှု၊ စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် အပြစ်အနာအဆာတွေကိုပဲ တွေ့မြင်၊ ကြားသိ၊ နားလည် သဘောပေါက်တတ်ကြတာချည်း မဟုတ်။ အခုလည်း ကိုဗစ်(Covid -19) ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဆိုးကျိုးများစွာ ရှိခဲ့ပေမယ့် အကောင်းမြင်ဘက်ကနေ စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်လျှင် ပရဟိတသမားများစွာ၊ သူရဲကောင်းများစွာ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများစွာ၊ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အားမန်များစွာ၊ အနစ်နာခံမှုများစွာ၊ စွန့်လွှတ်မှုများစွာ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုများစွာတို့ကိုလည်း လေးစားအားကျ အတုယူဖွယ်ရာ၊ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တွေ့မြင် ကြားသိခဲ့ကြရပါတယ်။ ၂၁ ရာစု ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာတော့ ၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ ၂ဝဝ၈ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖျက်သိမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု၊ ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံကြီးမီးလောင်ခြင်း တို့ကို ကျော်လွန်ပြီး စံချိန်ပေါင်းများစွာတို့ကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီး … Continue reading Covid -19 သင်ခန်းစာ (ဆောင်းပါး) →
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ရသ, ဆောင်းပါး, Lifestyle	Leaveacomment June 24, 2020 1 Minute
“၂၁ ရာစု လူမှုရေးဖတ်စာ” (ဆောင်းပါး)
မော်လမြိုင်၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၀ ၂၁ရာစုတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အနှစ်သာရပြည့်ဝအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက လူမှုရေးသည်လည်း အထူးအရေးကြီးလေသည်။ လူမှုရေးသည် လူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အထူးအရေးကြီးလေသည်။ လူမှုရေးသည် လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် တစ်ဘက် ကမ်းပြိုလျှင် တစ်ဘက်သောင်ထွန်းဖြစ်အောင်၊ မြွေမသေ တုတ်မကျိုးဖြစ်အောင်၊ ရှဥ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြစ်အောင်၊ အထူးသဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် အကျိုးမယုတ်စေဘဲ အငြင်းမပွားစေဘဲ မနစ်နာစေဘဲ win-win သဘောတရားဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်။ အားလုံးအောင်ပွဲ သို့မဟုတ် စုပေါင်းအင်အား သို့မဟုတ် ရောင်စုံပန်းခင်း သို့မဟုတ် မတူကွဲပြားသည့်အလှတရားများကို စုစည်းကား အကျိုးစီးပွား အလှတရားကို ချိုမြိန်စွာ စုပေါင်းခံစား တတ်ကြခြင်း အနုပညာပင်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးသည် လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးဟုဆိုခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အမှုထမ်းအရာထမ်းများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ … Continue reading “၂၁ ရာစု လူမှုရေးဖတ်စာ” (ဆောင်းပါး) →
Mawlamyine Daily	ရသ, ဆောင်းပါး, Lifestyle	Leaveacomment June 24, 2020 1 Minute
https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/videos/602052740410717/ မျောလမွိုငျ၊ ၁၇ ဇှနျ ၂၀၂၀ အမှိုကျပုံမှာလညျး mask တှမြေားလိုကျတာ ဖွူ နီ ပွာ ဝါ နကျ ‌ကွောငျ ကြား အရောငျမြား ကောကျယူလိုကျတဲ့ ရသေနျ့ ဗူးခှံမှာလညျး mask နဲ့ အခြိုရညျဗူးခှံ မှာ လညျး mask နဲ့ ကျောဇလုံ အပဲ့ကလညျး mask နဲ့ ဒနျအိုး ပေါကျလညျး mask နဲ့ မြားလိုကျတဲ့ maskတှေ ..ပေါလိုကျတဲ့ mask တှေ ညကမကျတဲ့ အိပျမကျထဲမှာတောငျ ‌‌တ‌‌စ်ေဆက mask နဲ့ ငါတို့ရဲ့ ဆယျပအေကယျြတဲထဲမှာလညျး maskကငါးခုတောငျ ကွယျမွငျလ မွငျ ဟငျးလငျးပှငျ့ ခေါငျမိုးကို ကွညျ့ရငျး ဆေးထားတဲ့လကျနဲ့ စုံမိုး ဆုတောငျးမိတယျ … Continue reading ပေးတဲ့Mask နဲ့ပွညျ့ပါရစေ →
Mawlamyine Daily	ကဗျာ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment June 17, 2020 1 Minute
https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/videos/2605782173030622/ မျောလမွိုငျ၊ ၂ ဇှနျ ၂၀၂၀ ကဗြာဆရာ ငဇ ၏ကဗြာကို ကဗြာဆရာဂိုးဂိုး(မောရမွိုငျ)မှ ရှတျဖတျထားပါတယျ။
Mawlamyine Daily	ကဗျာ, ရသ, Lifestyle	Leaveacomment June 2, 2020 1 Minute